Akụkọ ihe mere eme nke Sichuan Bonny Heavy Machinery Co., Ltd.
Owuwu nke mba atọ ahịrị, na Fushun Excavator Factory e nwere obere kpaliri Luzhou, Sichuan, na factory aha ya bụ Changjiang Excavator Factory.
Na-emepụtakarị ihe ndị na-egwupụta ihe na igwe crawler
Emepụtara WY160 nke mbụ zuru oke nke hydraulic ma nweta ihe nrite nke atọ nke mmezu sayensị na teknụzụ site na Ministry of Machinery Industry na August 1981.
Nkehydraulic excavator WY160 emelitere ka WY160A, nkwalite arụmọrụ ka ukwuu.
Factorylọ ọrụ ahụ ewepụtala imewe na teknụzụ nrụpụta yana akụrụngwa teknụzụ isi nke R962,R972,R982 ọkara na nnukwu hydraulic excavators si Germany Liebherr ụlọ ọrụ.Site mgbaze na absorption nke teknụzụ mbubata.,anyị mepụtara ma mechaa usoro mbụ zuru ezu nke 22t, 25t, 32t, 40t, 45t, 56t, 70t na 90t hydraulic excavators, wee ghọọ ọkachamara emeputa nke hydraulic excavators na China n'oge ahụ.
Igwe ọkụ hydraulic mbụ eletrik WDY452(klaasị 45t)emepụtara nke ọma.
Emepụtara WY160A mbụ grabber nke ọma, wee kwalite ya ma kwalite ya na WZY40.,ma kwalite ya nke ọma na ebe nchekwa, ọdụ ụgbọ mmiri, na ebe a na-ebutu na ibutu igwe igwe nchara n'ofe mba ahụ.
A na-emepụta usoro nke 6 nke ndị na-egwu mmiri hydraulic zuru ezu, ndị na-eji ígwè na ihe ndị na-emepụta ihe na-emepụta nke ọma ma tinye ya na saịtị ndị ahịa n'ụlọ na ná mba ọzọ. Igwe igwe na-ekpuchi 20 ruo 100 tọn.
Dabere na nhazigharị nke ọma nke mbụ Sichuan Changjiang Excavator Co.,Ltd.,Ụlọ ọrụ Sichuan Bonny Heavy Machinery Co., Ltd.,Ltd. e hiwere n'ihu ọha.
A na-emepụta usoro nke 7 zuru oke hydraulic excavators, ígwè grabs, na grabs nke ọma. Ngwaahịa ngwaahịa sitere na 6 tọn ruo tọn 220. Nke mbụ 220-ton (12 m³) eletriki hydraulic excavator malitere ịmalite.edmmepụta na arụ ọrụ.
Bonny Heavy Machinery rụpụtara igwe mkpofu ụgbọ ala mbụ CJ300-7 nke ọma,ma tinye ya n'ahịato eji, nke bu wihendị ọrụ natara.
Emepụtara usoro 8 ahụ zuru oke hydraulic excavator, igwe na-ejide ihe na igwe mkpofu ụgbọ ala nke ọma wee tinye ya n'ahịa.to use.The elu oru echiche emeriwo otuto otuto si ọrụ.
Bonny Heavy Machinery kwagara n'osisi ọhụrụ a n'ozuzu ya wee biri na mpaghara teknụzụ dị elu nke mba.